Jurgen Klopp: ‘Liverpool waa Koox isku kalsoon’ Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Jurgen Klopp: ‘Liverpool waa Koox isku kalsoon’
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa ku qaadan doona waqtiga kooban ee uu heysto inuu isku dayo inuu isbedel ku sameeyo qaab ciyaareedka kooxdiisa ka hor kulanka weyn ee FA Cup ee ay la ciyaarayaan kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester United .
Guuldaradii ka soo gaartay Burnley habeenkii Khamiista kaliya ma aysan soo gabagabeynin rikoorkooda 68-kulan ee aan laga badinin garoonkooda laakiin waxa ay sii dheereysteen rikoorkoodii gooldhalinta Premier League ee afar kulan.
Klopp ayaa si hufan u lahaan doona laba tababar si loo soo xiro hoos u dhac keeni kara inuu carqaladeynayo difaacashadooda horyaalka, haddii aysan aheyn xilli ciyaareedkooda oo dhan.
“(Kulankii Burnley) waxaan helnay 28 darbo, lix bartilmaameed, waxaan maqlay inaan heysanay 90 shantii kulan ee ugu dambeysay iyo hal gool.
“Taasi waa tiro aanan dooneynin inaan helno waxaan diirada saareynaa isbadal Cusub.
Macalinka ayaana ku Celiyay in ay heestaan Kalsooni Buuxda.
Previous articleRaphael Varane oo doonaya in uu ka tago Real Madrid
Next articleKoulibaly oo wali diirada u saaran Macalinka Manchester United Solskjaer